टर्मिनल वा ग्राफिकली बाट उबन्टुमा आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्नुहोस् Ubunlog
टर्मिनल वा ग्राफिकबाट उबन्टुमा आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्नुहोस्
अर्को लेख मा हामी हामी कसरी गर्न सक्छौं मा एक नजर लिन जाँदैछन् टर्मिनल वा ग्राफिक बाट आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्नुहोस्। आज आईएसओ छविहरू जताततै छन्। तिनीहरू केहि चीजहरूको लागि धेरै उपयोगी छन्, तर सामान्यतया हामी तिनीहरूलाई सफ्टवेयर स्थापना छविहरूको रूपमा फेला पार्नेछौं। आईएसओ छविहरू पनि ब्याक अप र डाटा भण्डारणको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यस प्रकारको फाईलहरू, द्वारा शासित छन् आईएसओ 9660 XNUMX XNUMX० मानक, जसले तिनीहरूको नाम दिन्छ। जसरी यसले आईएसओ 9660 9660 9660० प्रोटोकल वा युनिभर्सल डिस्क ढाँचा (UDF) प्रोटोकल प्रयोग गर्दछ जुन ISO XNUMX XNUMX XNUMX० सँग मिल्दो छ, जब इन्टरनेटमा वितरण गर्दा यो फाईलहरूको लागि उपयोगी हुन्छ जुन कुनै सूचनाको नोक्सान वा डाटाको परिमार्जन बिर्सनु हुँदैन। मूल संरचना। यद्यपि आईएसओ XNUMX XNUMX XNUMX० «को ढाँचाको रूपमा सेट गरिएको छपढ्न मात्र मिल्ने« केहि प्रोग्रामका साथ यी फाईलहरू परिमार्जन गर्न सम्भव छ। Gnu / Linux मा हामीसँग ISO छविहरू प्रबन्ध गर्ने उत्कृष्ट तरिकाहरू छन्। हामी तिनीहरूलाई हाम्रो ग्राफिक डेस्कटपमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौं वा हामी तिनीहरूको साथ कमान्ड लाइनबाट विशेष रूपमा कार्य गर्न सक्षम हुनेछौं। दुबै विकल्पका उनीहरूका फाइदाहरू छन्।
1 कसरी आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्ने
1.1 आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्न आदेश रेखा प्रयोग गर्नुहोस्
1.1.1 आईएसओ अनमाउन्ट गर्नुहोस्
1.2 आईएसओ छवि माउन्ट गर्ने ग्राफिकल तरीका
1.2.1 फुरियस आईएसओ माउन्ट प्रयोग गर्नुहोस्
कसरी आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्ने
आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्न आदेश रेखा प्रयोग गर्नुहोस्
टर्मिनल हामीलाई प्रदान गर्दछ एक आईएसओ माउन्ट गर्न को लागी एक सरल र सीधा तरीका हाम्रो प्रणालीमा। यो विकल्प दुई क्लिक जत्तिकै छिटो छैन जुन हामीलाई ग्राफिकल वातावरणमा चाहिने छ, तर यो पनि जटिल छैन।
माउन्ट एक आईएसओ छवि यो Gnu / Linux मा कुनै पनि फाईल प्रणाली माउन्ट गर्नु जस्तै छ। हामीले केही विकल्पहरू थप गर्नुपर्नेछ। नबिर्सनुहोस् कि यस प्रकारको फाइलहरू पनि माउन्ट गर्न हामीलाई हाम्रो इमेज माउन्ट गर्नको लागि डाइरेक्टरी चाहिन्छ। संक्षेपमा, टर्मिनलमा (Ctrl + Alt + T), हामीले केवल निम्न जस्तो केहि लेख्नुपर्नेछ:
यो हामीले सिर्जना गरेको निर्देशिकामा आईएसओ छवि माउन्ट हुनेछ। जसलाई यस अवस्थामा आइसो भनिन्छ र मिडिया फोल्डरमा अवस्थित छ।
जब हामी कमाण्डमा -t सूचित गर्दछौं, माउन्ट भइरहेको फाईलप्रणालीको प्रकार निर्दिष्ट गरिएको छ, जुन यस अवस्थामा आईएसओ हो। यो कडाइका साथ आवश्यक छैन, तर यो सुरक्षित रहनु उत्तम हो।
-O प्रयोग गरेर, हामी लुप विकल्प स indicate्केत गर्दछौं जुन प्रणालीलाई भौतिक उपकरणको सट्टा भर्चुअल लूपब्याक इन्टरफेस प्रयोग गर्न भन्छ। आईएसओ '/ dev' डाइरेक्टरीमा सूचीको साथ एक वास्तविक उपकरण छैन, तपाईं यो थप्न आवश्यक छ।
जब हामी हाम्रो आईएसओ माउन्ट गर्छौं, हामी एक चेतावनी सन्देश देखाइने छ जसले संकेत गर्दछ कि फाइल केवल पढ्ने मोडमा माउन्ट गरिएको थियो। यो पूर्ण सामान्य हो।
आईएसओ अनमाउन्ट गर्नुहोस्
टर्मिनलबाट आईएसओ अनमाउन्ट गर्न धेरै सजिलो छ। हामी यसलाई अनुसरण गरेर हासिल गर्नेछौं अर्को युनिट हटाउँदा जस्तै समान प्रक्रिया.
आईएसओ छवि माउन्ट गर्ने ग्राफिकल तरीका
आईएसओ छविको साथ भौतिक डिस्कमा काम गर्दा, डेस्कटप वातावरणमा आउने ग्राफिकल उपकरणहरूसँग काम गर्न सब भन्दा छिटो हुन्छ।
हामीले केवल आईएसओ फाइल माउन्ट गर्नुपर्नेछ। प्राय Gnu / Linux मा फाइल प्रबन्धक मूल आईएसओ समर्थनको साथ आउँदछन्। धेरै सम्भावित केसहरूमा, हामी केवल आईएसओ फाइलमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र चयन गर्न आवश्यक पर्दछ।फाईल माउन्टरको साथ खोल्नुहोस्', वा बराबर विकल्प।
जब हाम्रो डेस्कटपमा फाईल प्रबन्धक खोल्दा र हेरेर विन्डोको छेउ जहाँ भण्डारण उपकरणहरू सूचीबद्ध छन्लामो समय भन्दा पहिले, डिस्क देखा पर्दछ।
एक पटक माउन्ट गरेपछि, तपाईंले डिस्कमा क्लिक गर्नुपर्नेछ र सामग्री विन्डोको मुख्य भागमा खुल्नेछ। हामी मध्यममा फाईलहरू पढ्न सक्दछौं र हाम्रो कम्प्युटरमा चीजहरू प्रतिलिपि गर्न सक्दछौं।
जब हामी सक्दछौं, हामी गर्दछौं उपकरण सूचीमा अवस्थित डिस्कमा दाहिने क्लिक गर्नुहोस् र हामी यसलाई अनमाउन्ट गर्नेछौं। हामी पनि गर्न सक्छौं Eject आइकन प्रयोग गर्नुहोस्, यदि त्यहाँ कुनै छ भने।
फुरियस आईएसओ माउन्ट प्रयोग गर्नुहोस्
यदि जेसुकै कारणको लागि, तपाईंलाई वास्तवमै आवश्यक छ अर्को अनुप्रयोग आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्न, फुरियस आईएसओ माउन्ट एक सफ्टवेयर हो जुन यी फाइलहरूलाई ग्राफिकल वातावरणबाट माउन्ट गर्नका लागि अत्यन्त उपयोगी हुन सक्छ। छ प्राय Gnu / लिनक्स वितरणका लागि उपलब्ध.
उबुन्टुमा तपाईले यो प्रोग्राम स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ बाट सफ्टवेयर विकल्प वा टर्मिनलमा निम्न आदेश प्रयोग गरेर (Ctrl + Alt + T):
अल्गनस डे लास फुरियस आईएसओ माउन्टको सामान्य विशेषताहरू तिनीहरू छन्:
सवारी स्वचालित तस्बिर फाइलहरू आईएसओ, आईएमजी, बिन, MDF र NRG।
सक्छ स्वचालित रूपमा माउन्ट पोइन्ट सिर्जना गर्नुहोस् गृह डाइरेक्टरीमा
स्वचालित रूपमा disassembles सक्रिय छवि फाईलहरू।
स्वचालित रूपमा माउन्ट डाइरेक्टरी हटाउँदछ घर होम डाइरेक्टरीलाई यसको अघिल्लो स्थितिमा फर्काउन।
स्वचालित रूपमा बचत गर्नुहोस् अन्तिम १० छविहरूको ईतिहास माउन्ट गरियो.
धेरै छविहरू माउन्ट गर्नुहोस् समस्या छैन।
ISO र IMG फाईलहरू जलाउनुहोस्.
जेनेभा Md5 र SHA1 चेकसम.
यो हुन सक्छ यस कार्यक्रम को बारे मा अधिक जान्नुहोस्यसको वेबसाइटमा लन्चप्याड.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » टर्मिनल वा ग्राफिकबाट उबन्टुमा आईएसओ छविहरू माउन्ट गर्नुहोस्
एन्जो जपाटा भन्यो
नमस्कार राम्रो! पोष्ट धेरै राम्रो छ! म तपाईंलाई सोध्न चाहान्छु, के तपाईं आदेश रेखाका साथ बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सक्नुहुन्छ?
धेरै धेरै धन्यवाद! मलाई युबुनलग मन पर्छ, म लिनक्सको दुनिया सिक्नको लागि उत्सुक छु!
Enzo Zapata लाई जवाफ दिनुहोस्
डेमियन एमोएडो भन्यो
नमस्कार USB जुन यो पोष्टमा चरणहरूसहित सिर्जना गरिएको छ, यदि यो बुटेबल छ। तर तपाइँको कम्प्युटरको BIOS मा बुट अर्डर परिवर्तन गर्न सम्झनुहोस्। Salu2।
उबुन्टु रिपोजिटरीमा आधारित केही वितरणहरूमा, "फाईल माउन्टरको साथ खोल्नुहोस्" विकल्प ड्रप-डाउन मेनूमा देखा पर्दैन, त्यसैले तपाईंले "अर्को अनुप्रयोगसँग खोल्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुपर्नेछ। मलाई थाहा थिएन कि छवि सम्पादक नटिलसको साथ पूर्वनिर्धारित रूपमा आएको थियो, टिपका लागि धेरै धन्यबाद।
डेभिड Q. भन्यो
डेभिड क्यू लाई जवाफ दिनुहोस्।
कामको लागि धन्यबाद, यसले मलाई मद्दत गर्यो
Isidro लाई जवाफ दिनुहोस्
भिडियो संपादकहरू AppImage ढाँचामा जुन हामी उबन्टुमा प्रयोग गर्न सक्छौं
उबन्टु १.5.०18.04 LTS मा MPD को QtXNUMX मा कन्ट्याटा ग्राफिकल ग्राहक स्थापना गर्नुहोस्